आर्गानिक उत्पादन नै हाम्रो प्राथमिकता हो–राज गोपाल सापकोटा - Navanari
Home अन्तरवार्ता आर्गानिक उत्पादन नै हाम्रो प्राथमिकता हो–राज गोपाल सापकोटा
आर्गानिक उत्पादन नै हाम्रो प्राथमिकता हो–राज गोपाल सापकोटा
२१ चैत्र २०७८, सोमबार ०७:५०
फेमली ट्रेड इन्टर प्राइजेज लिमिटेड पोखरा कम्पनीका एक कुशल प्रतिनिधि हुन् राज गोपाल सापकोटा ‘कार्बनल प्रोफेसनल हङकङ’ ब्राडले उत्पादन गरेका कस्मेटिक प्रोडक्टसँग जोडिएर उनी लामो समयदेखि काम गरिरहेका छन् । पोखराबासी भएको नाताले उनी लगायत उनको परिवारले नै पोखराबाट यस कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्टको व्यापार गर्दै आएका छन् । ‘कार्बनल प्रोफेसनल हङकङ’ ले उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरु काठमाडौँ भन्दा अहिले बाहिर जिल्लाहरुमा चर्चामा छ । पछिल्लो समय ग्राहकहरुले दिएको सकरात्मक प्रतिक्रिया अनुसार काठमाडौंमा पनि ‘कार्बनल प्रोफेसनल हङकङ’ का उत्पादित प्रोडक्टले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । कम्पनीको नारा ‘परिवारको राम्रो जीवन शैलीसँगको कपाललाई प्राकृतिक पूर्णता दिनु हो ’
तपाईं यो व्यवसायमा कसरी लाग्नु भयो ?
हामीले करिब ६,७ वर्ष अगाडी पारिवारिक व्यापार सञ्चालन गरेका थियौँ जसमा सुरुवाति दिनहरुमा कपडाको आयात गर्दथ्यो । बीचमा त्यसलाई छोडेर कस्मेटिकसँग जोडिएका हौँ । यसरी नै म यस पेसामा जोडिएको हुँ ।
‘कार्बनल प्रोफेसनल हङकङ’ का प्रोडक्टको व्यापार कहाँबाट सुरु गर्नुभयो ?
खासमा हामी पोखरा बासी भएकोले हामीले ‘कार्बनल प्रोफेसनल हङकङ’ का प्रोडक्टको व्यापार पोखराबाट नै सुरु गरेका हौँ । काठमाडौँलाई मध्यनजर गर्ने हो भने हाम्रो प्रोडक्ट यहाँ भन्दा बाहिरी जिल्लाहरुमा धेरै परिचित छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा यस प्रोडक्टको स्थान कस्तो छ त ?
हामीले काठमाडौं भन्दा बाहिर राम्रो प्रतिक्रिया आएपछि नै यहाँ प्रोडक्टको प्रचारप्रसार गर्न थालेका हौँ । एक वर्ष अगाडी हामीले केमिकल सेमिनार पनि काठमाडौँमा नै गरेका थियौँ जसमा टेक्निसियन रायन राईले हामीलाई साथ दिएका थियौँ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा रहेका व्यवसायीक सौन्दर्यविद्हरुले दिएको अथाहा माया र साथको कारण हाम्रो प्रोडक्टको रोजाई र खोजाइमा पर्न सफल भएको छ । । पछिल्लो समय काठमाडौंको मूख्य शहरमा हाम्रो कम्पनीका प्रोडक्टको माग पनि बढ्दो क्रममा छ ।
तपाईंको कम्पनीले कस्तो प्रोडक्ट उत्पादन गरिरहेको छ ?
विशेष गरी हाम्रो कम्पनीले पार्लरमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । पार्लरमा पनि स्किन र हेयर दुई पार्ट हुन्छन् । अहिले हामीसँग पूर्ण रुपमा हेयरका प्रोडक्टहरु छन् ।
हेयरसँग सम्बन्धी के के प्रोडक्ट छन् ?
हेयरमा लगभग हामीसँग चार किसिमको ट्रिटमेन्ट,जसमा १०० प्रतिशत ड्यामेज रिपियर,डबल ट्रिटमेन्ट, पपया ट्रिटमेन्ट केराटिन रहेका छन् । अर्को हामीसँग भिटिमिन इ स्याम्पु कन्र्डिसनर,विथ कोल्याजन टू इन वान स्याम्पु कन्र्डिसनर, एन्टी ड्यान्ड्रफ, हेयर लसको केटारटिन अर्गान भनेर कर्लर स्ट्रेट र केराटिन, हेयर कर्लर, फो डेप्लोपल ब्लिचिङ पाउडर रहेको छ ।
कति प्रकारका स्ट्रेट क्रिम छन् ?
हामीसँग थ्रि वान,पपया फ्लेबर, र क्यासियो नामक स्टे«ट क्रिमहरु छन् । त्यस्तै हेयरको लागि पर्पल स्याम्पु,आर्गान ओयल सिरम,असायी ओयल रहेका छन् ।
आर्गान र असायी ओयल भनेको के हो ?
अर्गान ओयल एक बिरुवाको तेल हो । आर्गन रूख (अर्गानिया स्पिनोसा एल) को कर्नेलबाट उत्पादन गरिन्छ । यसको उत्पादन मोरोस्कोबाट भएको हो । यसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पनि निकै फाइदा पुर्याउँछ । पछिल्लो समय कस्मेटिक प्रोडक्टमा प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै असायी ओयल असायी पाम नामक फलबाट बनाइन्छ । यो फल अमेजन वर्षाबनमा पाइन्छ । यसको कर्लर पर्पल हुन्छ । । यसमा धधेरै प्रकारका एसिडहरु जस्तै,भ्यालिनिक एसिड,सिरिन्जिक एसिल,लगायत पाइन्छ ।
तपाईंहरुसँग कति प्रकारका हेयर कर्लर छन् ?
हामीसँग १०० एमएलको ५० भन्दा धेरै हेयर कर्लरहरु छन् । हामीसँग चार वटा डेप्लोपर छन् ।
‘कार्बनल प्रोफेसनल हङकङ’ का प्रोडक्ट कसरी पोखरा आइपुग्छ ?
हाम्रो कम्पनीमा आउँने सबै प्रोडक्टहरु बाहिर नै सिल प्याक भएर आएका हुन्छन् । कस्मेटिक प्रोडक्टहरु बाहिरबाट विभिन्न ड्रमहरु ल्याएर पछि भर्ने तथा बनाउने गरिन्छ । तर हामो कम्पनीका प्रोडक्टहरु बन्ने क्रममै सबै बोतल तथा प्याकहरुलाई भाइरस फ्रि बनाइएको हुन्छ । हाम्रो कम्पनीका प्रोडक्डले उत्पादिन देशका स्वास्थ्यसँगका मापदण्ड पुरा गरेर मात्र नेपाल आउँछ । त्यसैले हाम्रो प्रोडक्टस् फिनिस् गुड्सको रुपमा आउने गर्छ ।
कस्टोमरले तपाईंकै प्रोडक्ट किन रोज्ने ?
पहिलो कुरा हामीले उत्पादन गरेका हरेक प्रोडक्ट अर्गानिक हो । हाम्रो कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्टमा केमिकलको मात्र एकदमै कम प्रयोग भएको छ । हाम्रो प्रोडक्टमा स्क्यानर हुन्छ । जसमा कस्टोमरले कुन प्रोडक्ट कहाँ कसरी उत्पादन भएका हुन् सबै हेर्न सक्छन् ।
हामीले पूर्ण रुपमा हेयर सम्बन्धी प्रोडक्टहरु बजारमा ल्याइसकेका छौँ । अबको हाम्रो योजना भनेको स्किन सम्बन्धी प्रोडक्टलाई विशेष प्राथामिकता दिने हो । यसका लागि हामीले विशेष तयारी पनि गरिरहेका छौँ । हाम्रो अबको मूख्य योजना भनेको पैसालाई प्राथामिकता राख्नु भन्दा पनि हरेक ठाउँमा आफैँ नै पुगेर हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा बुझाउँदै जाने हो । यसलाई समय त लाग्छ, हतारमा हिडेर लड्नु भन्दा बिस्तारै हिडेर सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्नु हो ।
कोरोना कालपछि व्यापारको तथा प्रचार प्रसारको अवस्था कस्तो छ ?
कोरोना महामारीपछि हाम्रो व्यापारलाई पनि निकै असर परेको छ । मानिसहरुमा केही मात्रामा आर्थिक मन्दी छाएको छ जसले गर्दा साचे झै प्रचार र व्यापार हुन सकेको छ । भनेको समयमा बाहिरबाट समान आइपुग्न पनि ढिला भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय कस्मेटिक बजारमा ‘कार्बनल प्रोफेसनल हङकङ’ प्रोडक्टले आफ्नो नाम उच्च पारिरहेको छ । यस कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर नेत्र प्रसाद तिमल्सिना हुन् ।
अघिल्लो पोष्टचैत २६ गते महिला स्वास्थ्यको लागि सम्पदा पैदल यात्रा हुँदै
अर्को पोस्टग्रामी अवार्ड पाउने अरुज पहिलो पाकिस्तानी गायिका